သက်ဝေ: သီရိလင်္ကာ ခရီးစဉ် (၄)
မြသွေးနီ April 8, 2014 at 1:26 PM
မသက်ဝေတို့ ကိုညီလင်းသစ်တို့ ချောတို့ ဓာတ်ပုံရိုက်အင်မတန် ကျွမ်းကြတယ်။ အခုလို ခရီးသွားပို့စ်တွေမှာ ဓာတ်ပုံအသက်ပဲနော်။ တောင်ပေါ်မြို့လေးသို့ အတူလိုက်ပါရန်အသင့်။... :)
Aunty Tint April 8, 2014 at 9:03 PM
သီရိလင်္ကာ ခရီးစဉ်(၄)ကို ကြည်နူးစွာနဲ့ လိုက်လည်ခွင့် ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မသက်ရေ...
ညီမမြသွေးပြောသလို ဓာတ်ပုံတွေ ပို့စ်တိုင်းလှတယ် ..
chocothazin April 9, 2014 at 4:12 PM
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ်လေးနဲ့ ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် အေးဂျင့်လေးပါ ရေပေးပါနော်။
Ko Kyaw Oo April 10, 2014 at 7:23 AM
ဘ ဝ မှာေ ရာက် ဖူးသ င့် တဲ့နေ ရာတ စ် ခု ပါ ပဲ
ကို ယ် တို င်ရောက် ဖူးချ င်အောင် ဓါ တ် ပုံတွေ က ဆွဲဆောင် ပါ တ ယ်
ေ တာ် တဲ့ ဓါ တ် ပုံ ဆ ရာပါ ပဲ
ေ တာင်ပေါ် မြို့ ကလေးရဲ့ လှ တဲ့ မြ င် ကွ င်းများမျှော် လ င့် လျှ က်
Ousai April 11, 2014 at 8:31 AM
Dear Thet Wai,
You said that Photography was prohibited. Do they allow visitors in to pay homage to SwelTaw in person closely ?
Sint Si April 11, 2014 at 4:50 PM
Thank you for the colorfull and nice post.
Adora etc. April 16, 2014 at 2:53 PM
ပုံတွေကြည့်ရင်း တဝကြီးလိုက်လည်သွားတယ် မမသက်ရေ။
Adora etc. April 17, 2014 at 9:56 AM
Happy New Year Ma Ma Thet yay..
Ousai April 20, 2014 at 1:09 AM
On your FB you said " ဖူးတာတောင် ပလ္လင်လေးပေါ်မှာ အုပ်ထားတဲ့ စွယ်တော်ကိုပဲ ရည်မှန်းပြီး ဖူးခဲ့ရတာ။ သူတို့ ဖွင့်တဲ့အချိန်က တနှစ်မှာ ရက် နည်းနည်းပဲ ဖွင့်တာတဲ့...။ ".
I am very disappointed to know it.
I feel sorry for those who are frustrated with this management Thank you so much Thet Wai.
blackroze August 5, 2014 at 2:17 AM
အင်ကြင်းပန်းဆိုတာကို အခုမှသေချာမြင်ဖူးတယ်..အရင်က သတိမထားခဲ့မိဘူး...